Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dib ugu soo laabtey magaalada Muqdisho, kadib – STAR FM SOMALIA
Madaxweynaha Jamhuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dib ugu soo laabtey magaalada Muqdisho, kadib booqashooyin uu ku soo kala bixiyey dalalka Boqortooyada Sacuudiga, Jamhuriyadda India iyo Isutagga Imaaraadka Carabta.
Madaxweynaha ayaa socdaalkiisa ku bilaabay Boqortooyada Sacuudiga, halkaas oo uu kulan kula yeeshay Boqorka dalkaasi, Boqor Salmaan Bin Cabdulcasiis Al Sacuud iyo madax kale. Labada hoggaamiye ayaa kulankooda ku gaarey heshiisyo dhowr ah oo iskaashi, oo ay ka mid tahay in muwaadiniinta Soomaaliyeed ee xirfadaha kala duwan leh ay shaqooyin ka helaan dalka Sacuudiga.
Go’aankan waxaa uu Soomaaliya kala mid dhigaya waddamada kale ee horay Sacuudiga heshiiska uga dhexeeyay ee muwaadiniintooda ay sida sharciga ah uga xoogsadaan Sacuudiga.Waxaana meesha ka bixi doonta dhibaatooyinkii ay Soomaalida dalkaasi kala kulmi jireen ee dhinaca sharciyada shaqada.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kadib socdaal ku tagey magaalada New Delhi, halkaas oo uu kaga soo qeybgaley Shir Madaxeedkii 3-aad ee waddamada Afrika iyo India ee dhinaca iskaashiga dhaqaalaha.
Madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa kadib tegey magaalada Abu Dhabi, caasimadda dalka Isutagga Imaaraadka Carabta, halkaas oo uu maanta ku dhagax dhigey dhismaha safaaradda cusub ee Soomaaliya ku leedahay dalkaasi, kaas oo dhismihiisa ay maalgelineyso dowladda Isutagga Imaaraadka Carabta.Wafdiga Madaxweynaha waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ku soo dhoweeyay xubno ka tirsan labada gole.